अंगीकृतलाई उच्च पद असम्भव छ – Annapurna News
Pokhara 14	℃
Narayan kaji Shrestha Photo: Dinesh Gole/Nagarik/Republica
अंगीकृतलाई उच्च पद असम्भव छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले गर्ने काम कारबाही रेखदेख गर्ने भूमिकामा छन्। डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धोबीघाट जमघटपछि पार्टीमा राम्रो हैसियत राख्ने उनी यतिबेला पनि यसअघि जस्तै नरम बोल्ने नेताको व्यवहारबाट पृथक छन्। मधेसीले उठाइरहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या नै नदेख्ने उनीसँग विविध विषयमा नागरिकका मणि दाहाल र सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी:
पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पुग्न लाग्यो। समग्र सरकारी कामको मूल्याकंन कसरी गर्नुहुन्छ?
तत्कालिक मुद्दाहरुमा सरकारले केही सकारात्मक प्रयास गरिराखेको छ। सरकारको मुख्य काम संविधान क्रियान्वयनका लागि पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने काम संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउने र स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकारले गर्नु हो। त्यसका निम्ति मधेसकेन्›ित पार्टी, थारू समुदाय र अन्यसँग पनि वार्ता गरेर राजनीतिक ढंगले समाधान खोजी संविधान क्रियान्वयनका लागि थप उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु दोस्रो कार्यभार हो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन आवश्यक छ। अर्को पुनर्निर्माणका कामलाई अझ प्रभावकारी र तीव्र बनाउनुपर्ने हुन्छ। यी तीनवटा राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यभार यो सरकारसँग छ। यी कार्यभार क्रियान्वयन प्रयास भइरहेको छ। यसमा कति सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसकै आधारमा यसको मूल्याकंन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नै सरकारको कामबारे टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन।
सरकारको कामको आलोचना विपक्षी दलबाट मात्रै नभई सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि हुन थालेको छ। तपाईँ त पार्टीले सरकारको काम कारबाहीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति पनि, कस्तो लागेको आलोचना?
सरकारलाई कसरी सफल बनाउने र कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हुने छलफललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। माथि उल्लेख गरेका कामहरु राम्रो भएमा सरकार सफल भइहाल्छ। नत्र गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। राम्रो हुने अपेक्षा गरौं।